Palestina: Ny Sarin’ny Fandalovana Tao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Rafik
Voadika ny 15 Marsa 2018 15:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, বাংলা, Ελληνικά, English
(Tamin'ny 14 Septambra 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ho an'ireo Palestiniana tafala tamin'ny fototra nisy azy, zava-tsarotra sy mampalahelo ny fiverenana an-tanindrazana indray. Nitsidika an'i Gaza ilay bilaogera Palestiniana Ibrahim ary tsy nahaloa-peo izy nahita izany. Ny rakitsariny no navelany ho antsika mba hamintinana ny fitsidihany .
Nandalo nandritra ny iray volana nitsidika an'i Gaza ilay bilaogera, monina any Eoropa sy mamahana bilaogy ao amin'ny Palestine Technoblog. Hoy izy nanoratra:
Efa nikasa ny hanoratra momba ity dia ity aho saingy tsy hitako ny teny tokony ilazana azy. Ny tena marina, nahafinaritra ilay dia, miaraka amin'ny dikan'izany teny izany rehetra. Saingy tsy ampy. Niezaka ny hanadino tanteraka ny fahatsiarovako rehetra aho, saingy tsy nahavita, na dia niezaka aza aho. Manantena aho fa afaka hiverina any Gaza tsy ho ela raha sitrapon'Andriamanitra. Ato amin'ity lahatsoratra ity, handefa sary vitsivitsy araka ny laharana nakana azy ireo avy aho. Avelako miaraka amin'ireo sary ianareo.
Ireto ny sasany tamin'izany:
Nanararaotra niaraka tamin'ny fianakaviany teny amoron-dranomasina ilay bilaogera
Ny fety tao Gaza
Faravodilanitra ao Gaza
Mankafy ny tsindri-tsakafo ao an-toerana
Trano rava, mampahatsiahy ny ady